भोलि अक्षय तृतीयामा सयौं वर्षमा एकपटक हुने दुर्लभ संयोग, भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम , Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भोलि अक्षय तृतीयामा सयौं वर्षमा एकपटक हुने दुर्लभ संयोग, भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम
डिसी नेपाल , ४ बैशाख २०७५
काठमाडौं। भोलि बुधबार अक्षय तृतीयाको दिन सयौं वर्षमा हुने दुर्लभ योग बनेको छ । अक्षय तृतीया तिथि भोलि बिहान पौने ४ बजेदेखि सुरु हुँदैछ । सूर्य सिद्धान्त ग्रन्थमा वर्णन गरिएअनुसार कृतिका नक्षत्रको प्रथम चरणमा मेष राशीमा सूर्य हुँदा सत्ययुग प्रारम्भ भएको थियो । भविष्य पुराणका अनुसार त्रेता युगको प्रारम्भ पनि यही दुर्लभ योगमा भएको थियो । यही योगमा बद्रीनाथ धाममा नरनारायणको अवतरण भएको थियो । भोलि पनि यही दुर्लभ संयोग परेको छ । यस्तो संयोग सयौं वर्षमा एक पटक मात्र पर्छ ।
ज्योतिषाचार्य वीरेन्द्रनारायण मिश्रका अनुसार यो योग निकै उत्तम फल दिने योग हो । मिश्रका अनुसार अक्षय तृतीयाका दिन पिण्ड बिना पनि श्राद्ध गर्न सकिने विधान छ । यो दिन गंगा र तीर्थ स्नानको विशेष महत्व छ । जल भरिएको कलश, पंखा, जुत्ता, भूमि दानको पनि यस दिन विशेष महत्व हुन्छ । अक्षय तृतीयाका दिन गंगा स्नान गर्नु निकै पुण्ड मानिन्छ । जसको कुण्डलीमा पितृदोष छ उनीहरु पिण्डदान, तर्पण गर्न सक्छन् ।
अक्षय तृतीयाका दिन सुन किन्नु, जमिन किन्नु, गृहप्रवेश, नयाँ व्यापार गर्नु र तीर्थयात्रा निकै शुभ मानिन्छ । यो दिन रोकिएका सबै काम पूरा हुनेछन् । यस दिन माता लक्ष्मीको कृपा प्राप्त हुन्छ । तर, पूजामा केही गल्ती भने गर्नु हुँदैन । यस दिन किनमेलको महत्व हुने भएकोले केही न केही अवश्य किन्नुहोस् । यो दिन चाँदी किन्दा विशेष लाभ प्राप्त हुन्छ । यस दिन केही नकिन्नु अशुभ मानिन्छ ।
यस दिन भगवान विष्णुको पूजामा तुलसीको प्रयोग अवश्य गर्नुपर्छ । तर नुहाएर चोखो कपडा लगाएपछि मात्रै तुलसी टिप्नुपर्छ । यस दिन सामान्यतया व्यक्तिको मन शान्त हुने मानिन्छ । यद्यपि यस दिन रिसाउनु निकै अशुभ मानिन्छ । शान्त मनले लक्ष्मीको पूजा गर्दा अधिक फल प्राप्त हुन्छ । यस दिन श्रद्धेय व्यक्तिको अनादर गर्दा जीवनमा अनिष्ट हुन सक्छ । यस दिन दान गर्नुको निकै महत्व छ । यस दिन केही न केही पण्डित वा गरिबलाई दान दिनु शुभ मानिन्छ ।